.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Xilisoft Photo to Flash
ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးက ဓါတ်ပုံတွေကို သီချင်း နောက်ခံလေးနဲ့ Flash Album လေး လုပ်တဲ့နေရာမှာ အလွန် လွယ်ကူသလို
Template ဒီဇိုင်းတွေကလည်း မိုက်ပါတယ်။ မူရင်းဆိုဒ်မှာဆိုရင် $29.95 နဲ့ ရောင်းစားတာပါ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က
Crack ဖိုင်လေးရှာပြီး Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးတော့မှ သုံးရလွယ်အောင် Portable လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download: Xilisoft Photo to Flash
Version 1.0.0 - Build 0114 [ Portable ]
ဓါတ်ပုံတွေကနေ Flash Album လုပ်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး ဆော့ဝဲလ်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ကိုယ် Flash Album လုပ်မယ့် ဓါတ်ပုံတွေကို Drag Photo(s) Here ထဲကို ဆွဲထည့်ပါ။ Folder လိုက်လည်း ရပါတယ်။
နောက်ခံသီချင်းကိုတော့ Drag Audio Files(s) Here ထဲကို ဆွဲထည့်ပါ။ ပြီးရင် Publish ကို နှိပ်ပြီး သိမ်းလိုက်ပေါ့။
File Name မှာ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ နာမည်ရေး Flash ဖိုင်ကိုတော့ Browse ကို နှိပ်ပြီး Desktop ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
အဲဒါကတော့ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ နေရာကို ရွေးပေါ့ဗျာ။ Desktop ပေါ်မှာဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ Flash Album လေးကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ..။ တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင်တော့ Credit ပြန်ပေးကြပါ။
Posted by Thurainlin at 01:05